Emmanuel Macron anosimbisa mutungamiri weAmazonian Raoni kuti atsigire France - TELES RELAY
HOME » pasi rose Emmanuel Macron anosimbisa mutungamiri weRaoni Amazonian kutsigirwa kweFrance
Emmanuel Macron anosimbisa mutungamiri weAmazonian Raoni wekutsigirwa kweFrance
Vatungamiri vana vemuAfrica vari kutarisa kuEurope nechinangwa chekutumira SOS kune mafungiro evanhu uye vatungamiri kuti vadzivirire zvisikwa zvakasiyana siyana uye vanhu veAmazon, vanotambudzwa nekukura kwemiti.
Nyika ine AFP Yakatumirwa pa 16 May 2019 pa 22h28, yakarongedzwa jana ku11h05
Nguva yeku Kuverenga 2 min.
Mutungamiri weFrance Emmanuel Macron unosangana nemuAfrica muchengeti wekuBrazil Raoni Metuktire paElysee Palace muParis, 16 May 2019. POOL / REUTERS
Emmanuel Macron China akagamuchira 16 May, akakurumbira Indian mukuru Raoni uye akamuvimbisa yokutsigira France mukurwira yayo kudzivirira zvipenyu uye vanhu Amazon, waitirwa kuwedzera kwemiti.
Pachiitiko chemusangano uyu, Elysee yakaratidza kuti France yakanga iri kuronga kugamuchira hurukuro yepasi rose yevanhu vemunharaunda pasi pose, zvichida muna June 2020.
The musoro wehurumende akataura maminitsi makumi mana nemashanu kusvika Elysee pamwe cacique Raoni nevamwe vatungamiriri vatatu Amazonian - Kailu, Tapy Yawalapiti uye Bemoro Metuktire - vanozvitsaurira uchimuratidza Europe kusvikira pakuguma May. Chinangwa-vhiki nhatu ichi revashanyi kuti nokuparura ane sos kuti pfungwa uye vatungamiri kuti vaponese kuchengeterwa guru Xingu, kumaodzanyemba wokuBrazil Amazon, mumwe zvipenyu kuchengeterwa vanenge 180 000 mativi makiromita inenge chikamu chetatu cheFrance.
Chirevo chakachengetwa kune vatinyoresa Verenga zvakare Brazil: kutambudzika kwevagari vemunharaunda pakatarisana nekunyombwa kwaJaiir Bolsonaro
"Ndinoda miriyoni, kunyanya mari mambishi madziro akaita kubva yemishenjere, kuti delineate Reserve chikuru Xingu anotambura zvechigarire kupindira huni vaitengerana uye mhuka, miners goridhe uye kunze kwemutemo , uyo anouya kuzovhima pasi redu apo iri ndiro mushambadziri kwatiri ", Raoni akatsanangura muhurukuro yakabvunzwa musi weChina Le Parisien.
Kudyarwa kwemasango kusvika 24%
Elysee yakatanga kuzivisa, mushure mekubvunzurudzwa, kuti France yaifamba "Tsigira purojekiti yaRaoni" maererano ne "Kuzvipira kwaro kune zvakasiyana-siyana uye hurumende yeG7" gore rino. Izvi kuzvipira, kusanganisira mari, zvichazoziviswa gare gare, zvichiti hurumende.
Rwendo rwaRaoni runouya mushure mokuuya, munaJanuary, wehutungamiri hweBrazil - kunyanya nemhaka yezvokurima zvebhizimisi - yaJaiir Bolsonaro, aimbova musoja wepamusoro ari kuda kupedza zvaanodana "Shiite yemhepo yakasvibirira".
Chirevo chakachengetwa kune vatinyoresa Verenga zvakare MuAmazon, kurwa kwaRaoni, wekupedzisira weKayapo
Kudyara kwemiti, iyo yakanga yanyanyisa kubuda muAmazon kubva ku2004 kusvika ku2012, yakadzokazve munaJanuary: + 24% yakaenzaniswa neJanuary 2018, maererano nehurumende isiri yehurumende Imazon. Kunyange zvazvo yakaramba muFebruary (- 57%) uye March (- 77%), makiromita makumi matatu emakiromita emasango emasango akazonyangarika mukutanga kwekutanga. Pamwedzi gumi nembiri yekupedzisira, kudyara kwemvura kwakawedzera ne 268%.
NaRaoni, Emmanuel Macron zvakare akakurukura dambudziko revanhu vemunharaunda muBrazil. "Sezvo nyika yeAmazonian" pamwe neGuyana, "France inowanzoita basa rokurwisa doro" et "Inodzivirira kodzero dzevanhu vemunharaunda, kunyanya sevatambi vanokosha mukuchengetedza masango nemarudzi akasiyana-siyana, uye naizvozvo vakabatanidzwa mukurwisana nekushanduka kwemamiriro okunze"vakati Elysee musangano.
Verenga chikwata: Kukwazisa kwevanhu vemunharaunda: "Sezvo kusarudzwa kwaJaiir Bolsonaro, tinorarama mavambo eapocalypse"
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/05/16/emmanuel-macron-assure-le-chef-indigene-raoni-du-soutien-de-la-france_5463077_3244.html?xtmc=france&xtcr=5
India: SC Inodzosera Shield yeMusumba Kolkata Mapurisa | India News
India: Sei chiMalasia chikafu chichienda kune mbavha | India News